Posted by Tranquillus | Jan 26, 2021 | Office
Sarimiaina mihetsiketsika misy lohahevitra miantsena kely ao amin'ny PowerPoint. Raha hamerina izany rehetra izany ianao dia manan-tombo amin'ny toro-hevitra iray taonina. Fomba tsara hitehirizana hevitra tsara ho an'ny diaporama manaraka. Araraoty ny fotoana mety hijerena ireo singa samihafa amin'ny famelabelarana tsara ao amin'ilay lahatsoratra sisa.
Omano mialoha ny firafitry ny fampisehoana ataonao
Rehefa hiara-mivory ny olona hanatrika ny fampisehoana nataonao. Tsy ho avy hijery sary mahafinaritra izy ireo. Manana asa izy ireo ary azo antoka fa tsy manam-potoana laniana. Tsy maintsy manomana araka ny tokony ho izy ny hafatra tianao hampitaina ianao. Ny drafitra an-tsipiriany izay mamaritra ny filaharan'ny lohahevitra hodinihinao sy ny filaharany manan-danja dia ilaina takiana.
Hamarino tsara fa tsy miovaova ny famelabelaranao
Miaraka amin'ny hevitra mazava momba ny fomba hisehoan'ny fidiranao an-tsaina. Zava-dehibe ho anao ny manamarina ny tsy fitoviana, na amin'ny singa, na amin'ny endrika iray manontolo. Raha mampiasa endritsoratra sy loko hafa ny slide tsirairay. Na milaza teny mifanohitra na mifanipaka tanteraka ianao, ny fanangonana hadisoana kely dia hamerina endrika amatirista. Raha ny mifanohitra amin'izay, ny vondrona slide iray izay manaja ilay sarintany an-tsary iray ihany dia manana fanambarana an-tsary sy tsara. Hanaporofo ny fahaizanao tonga lafatra amin'ny toe-javatra.
Ampiasao tsara ny haino aman-jery
Ampiasaina tsy misy fihoaram-pefy, ny sarimiaina miaraka amin'ny sary tsara tarehy dia afaka mampiambina ny mpihaino anao. Tandremo anefa sao mihoa-pefy amin'ity faritra ity. Slides voaravaka sary haingon-trano fotsiny izay tsy manampy na inona na inona. Mozika sarimihetsika eo afovoan'ny fampisehoana hanasongadinana antsipiriany tsy misy dikany. Izany rehetra izany dia azo raisina ho tsy fisian'ny fahamatorana. Tadidio fa ny sary dia tsara kokoa noho ny teny arivo ary tsara kokoa ny hitazomana azy ho tsotra. Ny famelabelarana dia tsy maintsy mifototra amin'ny fidiran'ny vavanao. Eo ny slide mba hanohanana anao sy hanazavana ny hevitrao.
HAMAKY Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny aterineto amin'ny fandikana lahatsoratra na pejy iray
Mampiasà loharano mifandraika amin'izany
Rehefa manentana isa iray ianao, fampahalalana iray, ilaina ny fahafantarantsika ny niandohan'ny teny nindraminao. Io dia hahafahan'ny mpihaino anao handinika ny fahamarinan'ny fampahalalana omenao azy ireo. Ny henjana sy ny maha-matotra ny asanao dia tsy azo anontaniana. Hihamafy ny fahatokisan-tenanao. Tsy ho diso hevitra ianao amin'ireo manipy tarehimarika na milaza zavatra tsy azo hamarinina, ireo charlatans.
Avereno famerenana ny famelabelaranao alohan'ny D-Day
Ampifanaraho amin'ireo famandrihana omena anao ny famerenanao. Ho an'ny fivoriana fohy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao dia ampy ny fitsapana mahazatra mahazatra. Etsy ankilany, amin'ny lohahevitra misy valiny lehibe raha misy ny lesoka. Tokony hialanao daholo ny tsy fitandremana, raha tsy ekenao ny vokany. Tsy misy fanontaniana momba anao mahatsapa eo imason'ny mpanjifa na mpitantana iray fa tsy miseho ny iray amin'ireo lohateninao. Taiza no nanadinoanao nanoratra ny lahatsoratrao rehetra. Tsy maintsy voamarina mialoha ny zava-drehetra.
Tutorial momba ny sarimiaina mihetsika PowerPoint 5 martsa 2021Tranquillus
Teo alohaFitsidihana ara-pitsaboana tamin'ny 2021: inona ny adidinao?
manarakaOrinasa: tsy afaka manao sarontava namboarina intsony ny mpiasa
Ahoana ny fomba hanadiovana ny tambajotra sosialy minitra vitsy miaraka amin'ny Mypermissions?
Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny aterineto amin'ny fandikana lahatsoratra na pejy iray
Fantaro ny AccountKiller, ny torolàlana ho an'ny mpampiasa manerantany izay manampy anao hisafidy ireo kaonty miverimberina.